Fihazana foza: Enjehina ny mpanao kolikoly politika any Angola · Global Voices teny Malagasy
Manana vola be noho ny mpilalao Cristiano Ronaldo ilay voafonja
Voadika ny 24 Jona 2021 4:57 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, Ελληνικά, English
Kolikoly any Angola – YouTube: Fahitalavi-panjakana ao Angola, sary nalaina tamin'ny 9 Jona 2021
Tao anatin'ny fepetra farany indrindra tamin'ny famoretana nasionaly momba ny kolikoly any Angola dia nandroaka olom-panjakana mpanao politika ambony ny manampahefana ka isan'izany ny lehiben'ny sampan-draharahan'ny fiarovam-panjakana, Pedro Sebastião, sy ny Mazaoron'ny Tafika Pedro Lussaty, izay voatazona ihany koa taorian'ny fiampangana fanodinkodinam-bola .
Noroahana tamin'ny volana May 2021 ireo tompon'andraikitra ireo tao anatin'ny “Operation Crab” (Fihazana foza), fanentanana miady amin'ny kolikoly tarihin'ny Sampan-draharahan'ny Fampahalalam-baovao-panjakana sy ny fiarovana (SINSE) sy ny Sampan-draharaha misahana ny Famotorana heloka bevava (SIC). Ny Mazaoron'ny Tafika Pedro Lussaty no ifantohan'ny tatitra, izay tsy mbola fantatry ny besinimaro hatreto. Tao amin'ny sampan-draharahan'ny fiarovam-panjakanan'ny filohan'ny Repoblika Angoley izy.
Tohin'ny andianà tatitra nataon'ny Fahitalavi-panjakana ao Angola (TPA) tamin'ny taona 2020 ny ankamaroan'ireo fandroahana ireo, mitondra ny lohateny hoe “O Banquete”, izay nampiharihary fa nanao kolikoly ireo mpanao politika malaza Angoley.
Niasa ho mpanampy ny sekretera jeneraly tao amin'ny sampan-draharahan'ny fiarovam-panjakanan'ny filohan'ny Repoblika i Lussaty. Notanan'ny Biraon'ny Lehiben'ny Fampanoavana ao Angola (PGR) izy taorian'ny nipoiran'ny tatitra fa mitana mangingina tranobe sy trano ary valizy maromaro misy vola dolara an-tapitrisany sy kwanza (vola Angoley) izy. Araka ny nolazain'ny TPA hoe:
Amin'ny kwanzas fotsiny dia manana 800 tapitrisa kwanzas ao an-tranony ilay olona voalaza fa mpanefoefo. Misy mponina miisa 30 tapitrisa ao amin'ny firenena ary efa saika ho ny karama farany ambany indrindra azo omena ny Angoley rehetra izany 800 tapitrisa kwanza izany.
Tao anatin'io lahatsoratra io ihany no nanambaran'ilay mpanefoefo fa tsy fantany ny tena sandan'ny vola azony. “Vao nahazo [vola] aho,” hoy izy. Nilaza ny tatitry ny TPA fa nanana vola betsaka noho ilay mpilalao baolina kitra Portiogey Cristiano Ronaldo i Lussaty, izay manana sanda mihoatra ny 500 tapitrisa dolara Amerikana.
Hatramin'ny nitaterana ity raharaha ity dia naneho ny fahatezerany tao amin'ny tambajotra sosialy ny Angoley. Misedra krizy lehibe amin'ny vidin-tsakafo any afovoan-tanàndehibe ny firenena, noho ny fiakaran'ny vidim-piainana, indrindra any amin'ny faritany atsimon'ny firenena. Izany no mitranga any amin'ny faritanin'i Cunene sy Huíla, ary koa ao an-drenivohitry ny firenena Luanda, izay misy fianakaviana ao anaty fahantrana tanteraka.
Izany no nahatonga ilay mpanao gazety Nok Nogueira nanao antso avo ho an'ireo Angoley handefa ny raharaha any amin'ny Fitsarana, mba hijerena izay tena mitranga ao Angola, araka ny nambarany tao amin'ny Facebook:
Alefaso any amin'ny fitsarana ny raharahan'i Lussaty. Vonoy ihany koa ny fahitalavitra ary manontania tena hoe manao ahoana ny tena Firenena, ilay iray ankoatra ny aseho sehatra.
Mandritra izany fotoana izany, nanoratra tao amin'ny pejy Facebook-ny i Tânia Campos, mpisera aterineto, fa raha tany Brezila no nisehoan'ity tranga ity dia nitarika hetsi-bahoaka ho an'ny Angoley izany, indrindra ny hitakiana ny fialan'ny antokon'ny fitondrana.
Ny zava-mitranga toy ny raharaha Lussaty amin'ny tambajotra sosialy, any amin'ny firenena hafa, ohatra, any Brezila dia efa eny an-dalambe daholo isika rehetra mitaky ny fialan'ny MPLA.
Nisy ihany koa ireo mahita ny raharaha Mazaoro Lussaty ho ohatra iray fotsiny amin'ny zava-mitranga amin'ny raharaha maro hafa any Angola:
Mankarary ny lohako ity tantaran'i Mazaoro Lussaty ity, ny zavatra mahatsikaiky indrindra dia ny fanaovana fanadihadiana azy saingy somary milamina satria mahalala tsara izy fa tsy hosamborina. Ny tena loza dia tsy izy irery no nanodinkodina vola an-tapitrisany tao amin'ny firenena. Mendrika ny tsara kokoa i Angola.
Mitovy amin'izany ihany koa ny fanehoan-kevitra nozarain'ireo mpisera hafa naneho hevitra momba ity raharaha ity:
Aty Angola, maro ny mpangalatra mpanao kolikoly sy manokana, ankehitriny ny fozan'i Mazaoro Lussaty no tranga amin'ity herinandro ity.
Ahitana trondro vaventy marobe ity raharaha ity amin'izao fotoana izao, mitsikera fotsiny fa aiza ny hafa….?
Kolikoly any Angola
Nanambara ny Tondro mampiseho ny kolikoly 2020 navoakan'ny Transparency International (TI) fa heverina ho iray amin'ireo firenena mpanao kolikoly indrindra eto amin'izao tontolo izao i Angola. Mitana ny laharana faha-142 ny firenena, manana isa 27, amin'ny 100.
Marihina fa tsy olana vaovao ny olan'ny kolikoly ao Angola. Raha ny marina, hita fa firenena mampanankarena mpanao politika akaiky ny mpitondra i Angola nandritra ny governemanta teo aloha, notarihin'i José Eduardo dos Santos nandritra ny 30 taona mahery.
Ohatra iray amin'izany ny zanakavavin'ny filoha José Eduardo dos Santos tamin'izany fotoana izany, Isabel dos Santos, izay voampanga ho nanao kolikoly nahatafiditra ny rainy sy ireo mpanao politika hafa tao amin'ny antoko Hetsi-bahoaka ho an'ny Fanafahana an'i Angola (MPLA), antoko nitantana ny firenena hatramin'ny nahazoany fahaleovantena.
Ankoatra izany, nanambara ny andiana tatitra antsoina hoe ‘Luanda Leaks‘, navoakan'ny Fiaraha-misalahin'ireo Mpanao Gazety Mpanadihady (ICIJ) tamin'ny taona 2020, fa orinasam-panjakana maro any Angola no nampiasaina ho amin'ny tombontsoan'olona manokana nandritra ny roapolo taona nitantanan'ny filoha teo aloha dos Santos.
Taorian'ny tatitra sy ny fisamborana an'i Lussaty tamin'ny “Fihazana Foza” dia nanafaka madiodio ny lehiben'ny sampan-draharahan'ny fiarovam-panjakana, Pedro Sebastião ny filohan'ny Repoblika ankehitriny, João Lourenço, noho izy voalaza fa voarohirohy tamin'ilay tantara ratsy.
Tsy mino ny olona sasany fa tsy hitovy amin'ny filoha teo aloha i João Lourenço raha hita fa nitana ny toeran'ny filoha lefitra izy rehefa nisy trangana kolikoly maro niseho tao amin'ny firenena.
Tsy mino mihitsy aza ireo Angoley fa hifarana ny kolikoly, araka ny notaterin'ny Deutsche Welle (DW) tamin'ny taona 2020.
“Mbola tsy misy fiantraikany amin'ny fiainan'ny mponina amin'ny faritra mahantra kokoa, izay mangataka vahaolana mivaingana amin'ny olana tsy misy fiafarany ny ady amin'ny kolikoly sy ny tsimatimanota, hoy ny DW, rehefa avy niresaka tamin'ny mponina ao Luanda.”